Dawladda Koonfur Galbeed oo Gacanta ku soo Dhigtay Al-Shabaab Dil Gaystay – Radio Daljir
Juunyo 17, 2017 6:20 g 0
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen kooxihii ka danbeeyay dilkii Baydhabo loogu gaystay Shiikh Madeer Sh. Maxamad Gaab, kamid ahaana ergooyinka wax ka soo xulay xildhibaanada Federaalka.
Ciimada ammaanka KG Soomaaliya ayaa xoojinayay maalmahii ugu danbeeyay ammaanka Baydhaba iyo guud ahaan gobolka, ayna maamulka isu soo dhibeen saraakiil iyo rag ka tirsan Al-Shabaab.
Hoos ka dhegayso waraysi Wasiirka Dhaqancelinta Maleeshiyaadka ahna kusimaha Wasiirka Amniga, Xasan Xuseen Eelaay. Wuxuu u waramay Cabduqaadir Yuusuf Irshaad.
Cali Khaliif oo Somaliland ku Biiray iyo Qoraalka Heshiiska (dhegayso)